सधैँ गोजीमा सुकुमेल बोकेर हिँड्नुस् ! सुन्दा अचम्म तर गजबको छ फाइदा | Rajmarga
आजकल मुटुको रोग सामान्य भएको छ। प्रायः मानिसहरूको मुटुको धड्कन कम हुन्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ मुटुको धड्कनलाई सही राख्नको लागी सानो सुकुमेल निकै प्रभावकारी छ। सुकुमेलमा पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमजस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । मानवको रक्त, शरीरमा पाइने तरल पदार्थ र टिसयुजको मुख्य तत्व पोटासियम हो। सुकुमेलमा पोटासियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ।
सुकुमेलले स्वाद बढाउनुका साथै माउथ फ्रेश्नरको काम पनि गर्छ। यसको सेवन गर्नाले मुखको गन्धमा सुधार आउछ।यदि तपाईँको मुख धेरै गनाउँछ र मान्छेहरू तपाइको छेउमा पर्न हिचकिचाउँछन् भने हर समय एउटा सुकुमेल मुखमा राख्न सक्नुहुन्छ।
पेटमा कब्जियत यानी बिरामीको निम्तो। त्यसैले सबैले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् कि कब्जियतको समस्या नहोस्। यदि तपाई कब्जियतबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सुकुमेल पकाएको पानी पिउनाले तपाईँलाई फाइदा गर्छ। यसले तपाईँकोपाचन क्रियालाई सही बनाएर कब्जियतबाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ।
Previous post: फेक इन्काउन्टर भन्दै चौतर्फी हल्ला भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीमाथि लिने भए यस्तो एक्सन !
Next post: यसरी हुँदैछ ३३ किलो सुन काण्डलाई पूर्णविराम लगाउने चलखेल
काेराेना भाइरसका कारण पाटन हस्पिटलमा एक ४५ वर्षिय पुरूषकाे मृत्युु
पछिल्लो २४ घण्टामा ९२७ जनामा कोरोना संक्रमण, ३ वटा थप कोरोना हस्पिटल